Budata Boeing 727-200 Advanced FSX & P3D - Rikoooo
downloads 55 742
Thomas Ruth, melite site na BK
Emelitere na 06 / 03 / 2018: Tụkwasịrị GPWS, Panel.cfg gbanwere site na German gaa Bekee, obere mkpọchi, kwukwara 727 arụmọrụ, Usoro na Nkwụsịtụ PDF na nchekwa akwụkwọ.
Emelitere na 04 / 09 / 2017: Ugbu a dakọtara Prepar3D v4, Auto-installer 10, mmegharị ụgbọ elu gbanwere, ihe dị adị karịa, ike mmanụ ọkụ karịa, agbakwunyere ụda ọdịnala, Rada ihu igwe.
Boeing 727-200 (Pax na Freighter) ụdị amaala dị elu maka FSX SP2 na Acceleration. Abịa na 2D panel na kokpiiti mebere gbakwunyere otu FMC na-arụ ọrụ! Gụnyere ihe ndegharị abụọ: Pacific Air Express eflp ADVA RSBK (INS) na HAPAG (FMC). ndabara dakọtara na ndabara. Ọzọkwa gụnyere ọtụtụ mmelite. -Agụ akwụkwọ ntuziaka.
The Boeing 727 bụ n'ihi na a nnọọ ogologo oge, ụgbọelu kasị ewu ewu n'ụwa nile. The 727 ama na nke mbụ n'ime 1963.
The imewe nke 727 bụ n'ihi a ikwere n'etiti United Airlines, American ụgbọ elu na Eastern Airlines na nhazi nke nọchiri ndị Boeing 707. United Airlines chọrọ a anọ maka ya flights ka ọdụ ụgbọelu na elu elevations, karịsịa ya n'ógbè nlekọta ọrụ Stapleton International Airport. American ụgbọ chọrọ a ejima-engine ugbo elu maka arụmọrụ ihe. Eastern Airlines-enwe olileanya maka a atọ engine maka flights na Caribbean. N'ikpeazụ, atọ ụgbọ elu kwetara na a trijet. N'ihi ya mụrụ na 727.
Onye edemede: Thomas Ruth, melite site na BK